Tempolin'i Chalong (Wat Chalong) ~ Journey-Assist - Mahaliana ao Phuket
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Tempolin'i Chalong (Wat Chalong)
Tempolin'i Chalong (Wat Chalong) ao Phuket
Famaritana momba ny Tempolin'i Chalong ao Phuket. Vidin-javatra.
Tempolin'i Chalong amin'ny sarintany. Ahoana no hahatongavana any.
Saripika sy lahatsary an'ny Tempolin'i Chalong
Hevitra ho an'ny Tempolin'i Chalong (valin'ny Google)
Famerenana ny Tempolin'i Chalong (Tripadvisor.ru)
Tempolin'i Chalong (Wat Chalong) ao Phuket. Overview
mila manomboka amin'ny zava-misy fa io no tempoly lehibe indrindra sy be mpitsidika indrindra any Phuket!
Misy anarana hafa amin'ity tempoly ity Chayyatararam.
Inona no misy ao
Raha ny marina, ny trano iray feno kompleks dia natsangana eto. Ao amin'ny faritanin'ny tranokala dia misy trano maromaro fa tsy izany: zaridaina, loharano, tilikambo lakolosy, crematorium, ahodrano, trano fisakafoanana ary fivarotana souvenir.
Ny sariohatra dia manana tsangambato elefanta maro.
Ary hoy ry zareo, raha toa ianao ka mamihina ny vavon'ilay elefanta lehibe indrindra, dia ho tanteraka ny faniriana! 🙂
Chedi Phra Menaat
Ny lehibe indrindra sy marevaka sy tsara tarehy indrindra dia ny trano Chedi Phra Menaat.
60 metatra ny haavon'ity tranobe ity ary avela hiditra ao an-toeran-kafa izy io raha tsy manao kiraro ianao, raha tsy manao kiraro ianao, fa any amin'ny faritra sasany amin'ny hazavana mafana ny masoandro, mitandrema handoro ny tenanao :). Misy gorodona telo ilay tranobe, fomba fijery mahafinaritra izay saika mahatratra 360 degre manomboka any ambony.
Namboarina vao haingana ity tranobe ity (tamin'ny taona 2001) mba hitahiry ny tranobe masina:
Fandraisana masina amin'ny Tempolin'i Chalong
fivahiniana ny tempolin'i Chalong - ampahan'ny hamaroan'ny Bouddha, izay tamin'ny taona 1999 dia nomen'ny Rama IX an'i King IX tamin'ny fitondrany 72 taona Sri lanka
Ny relic dia aseho ao anaty boaty vera, izay mivalona ao anaty sarcophagus lehibe, vita amin'ny fitaratra koa.
Raha mandohalika eo anoloan'ity relika ity ianao ary mamaky mafy ny tononkalo (ny lahatsoratra nosoratanao teo akaikin'ny relic) dia afaka manao faniriana ho tanteraka!
Ny tempolin-tsasatr'i Chongong complexe
Ho any amin'ny tempolin'ny tranobe be indrindra ubosot, ity dia trano mamirapiratra misy tafo telo mipopolo, toy ny hoe mandady tsirairay, tsy mahazo alàlana ny mpizahatany, ny moanina mandritra ny serivisy ihany.
Ny saina hafa dia voasarika ao anaty lafaoro be misokatra izay misy ny feo sy ny fipoahana indraindray, ka atahon'ny moanina ny fanahy ratsy.
Azonao atao ny milaza ny harena ao amin'ny tempoly, ny vinavina raisinao amin'ny fiteny Thai na sinoa ihany.
Amin'ny ankapobeny, ny Tempolin'i Chalong dia toerana mahafinaritra sy mahaliana, ary raha azo atao, dia ho azo antoka fa hamangy an'i Chalong, tsy hanenenanao izany.
Ity tempoly ity dia lasa fisaorana noho ny mpitokamonina, ny anarany dia Luang Pho Chem ary izy no lasa monenan'ny monasitera tamin'ny 1876, ka nijanona hatramin'ny nahafatesany tamin'ny 1908. Tsy monkana fotsiny izy, fa mpitsabo nalaza ihany koa. Ary nanjary nalaza izy satria tamin'io fotoana io dia nikarakara fanafihana ny sinoa tany Thailand, nandrava sy nandroba trano. Ary i Luang Pho Than dia nitarika ny milisy hiady tamin'ireo mpanafika ary niaraka nandresy ny sinoa ry zareo!
Soa akaikin'ny Tempolin'i Chalong
Isan-taona dia tsaboina (Wat Chalong Fair) atao any Chalong, fa vaovao ny andro mitazona azy ao anatin'ny taona. Tamin'ny taona 2018, ohatra, ny seho dia nanomboka ny 14 Febroary ka hatramin'ny 20 febroary.
Maharitra herinandro ny lanonana, amin'ny fotoana iray dia lasa toy ny barazy ny faritry ny kompleks an'ny tempoly, izay mandeha an-tongotra maro ny mponina.
Amin'ny lanonana dia afaka manandrana lovia eo an-toerana ianao, mividy souvenir.
Isan-karazany ny atrehana ho an'ny ankizy amin'ny toeram-pilalaovana, amin'ny hariva dia misy fampisehoana maro isan-karazany ary fampisehoana mandritra ny seho.
Toy ny fitsipika, mifarana amin'ny alàlan'ny kitay lehibe iray ny hariva amin'ny hariva lasa.
Ny Tempolin'i Chalong dia azo tsidihina na oviana na oviana amin'ny ora antoandro!
Afaka miditra eto ianao maimaim-poana.
Ahoana ny lalana mankany amin'ny Tempolin'i Chalong
Avy any amin'ny tanàna Phuket ka hatrany Chalong 10 km.
Tsy mandeha eto ny fitateram-bahoaka.
Azo atao ny miditra eto irery amin'ny alàlan'ny fiarakaretsaka na an-trano manofa fiara / bisikileta.
Azonao atao koa ny mahita fitsangatsanganana, ny lalana misy an'i Chalong.
Address: 70 Moo 6 Chaofa Rd, Chalong, Muang Phuket 83130, Thailandy
telefaonina: + 66 76 381 226
Tranonkala ofisialy https://www.wat-chalong-phuket.com/
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/ycyy8heM4aYDHKBb6
Tempolin'i Chalong (Wat Chalong) ao amin'ny sarintany
Tempolin'i Chalong (Wat Chalong). Sary sy horonan-tsary
Hevitra momba an'i Wat Chalong (famerenana Google)
Ny valiny ao amin'ny Wat Chalong (Tripadvisor.com)
Tempoly mahagaga. Nampitandrina avy hatrany aho fa ny 30 minitra izay nomena azy matetika ho ampahany amin'ny fitsangantsanganana avy amin'ny mpandraharaha mpizahatany dia mazava fa tsy ampy. Manoro hevitra anao aho ho tonga eto manokana, sy ny fomba hahafinaritra ny rivotra iainana amin'ity toerana ity.
Aza adino rehefa mijery ny taolana Buddha ianao dia manaova faniriana :). Betsaka ny very satria be dia be ny olona manodidina ary manadino fotsiny. Alohan'ny hanaovana faniriana dia mila mamaky ny mantra ianao. Tsotra ny soratra ao ary apetraka eo amin'ny takelaka iray eo akaiky eo.
Misaotra amin'ny fanazavana mahasoa.
Averiko ihany koa fa afaka miditra tsy misy kiraro fotsiny ianao, ary ny sorokao sy ny lohalikao. Latchki manokana ho an'ity olana ity maimaim-poana amin'ny fidirana.
Malalaka ihany koa ny fidirana amin'ny tempoly.